Federal Republic of Somalia: Election update - Page 11 - Politics - Somali Forum - Somalia Online
If these morons honor the September Agreement and adopted Baydhabo technical teams meeting outcome, the Somali people wa shams hako aqriyaan.j
Waxaa saaka lagu wadaa in uu Teendhada Afisyooni ka furmo shirka u dhaxeeya Madaxda dowladd Federaalka iyo...
Waxaa magaalada Muqdisho ku soo idlaaday shirkii wadatashi ahaa ee u dhaxeeyay madaxda dowlada Federaalka...
Shirkii Afisyooni Oo Maanta Baaqday
Shirkii madaxda dowladda Federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka ee maanta oo Talaado ah lagu waday inuu dib uga furmo Teendhada Afisyooni ee magaalada Muqdisho ayaa baaqday.
Dib u dhaca shirka ayaa waxaa sababay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo shalay safar ugu ambabaxay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug.
Madaxda ayaa la filayaa inay shirka isugu soo laabtaan berri oo Arbaco ah 07/04/2021, halkaasna kasii wadi doonaan shirka oo looga hadlayo ajandayaasha shirka guud ee xalinta khilaafka doorshada.
Shirkii Afisyooni Oo Maanta Baaqday - Horseed Media • Somali News
Shirkii madaxda dowladda Federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka ee maanta oo Talaado ah lagu waday inuu dib uga...
Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland oo Muqdisho ka dhoofay
Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland ayaa ka dhoofey magaalada Muqdisho kadib safar shaqo oo qaatey bil ay ku joogeen halkaas, waxaana safarkoodu yimid kadib markii ay kulan gaar ah la qaateen wakiilo ka socdey Beesha Caalamka, sidoo kale waxay shir la qaateen Madaxda Madasha Badbaado Qaran ee dhawaan la dhisey.
Madaxweynaha xilku ka dhamaadey Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isticmaalaya Golaha Shacabka ee xilkiisu dhamaadey ayaa gebi ahaanba soo xirey albaabkii wada hadalka.
Madaxweyne Deni iyo Madaxweynaha Jubaland ayaa maanta kulan la qaatey wakiilo ka socdey Beesha Caalamka ee wadey isu soo dhaweynta waxaana ay u sheegeen in Mowqifkooda ku aadan wixii ka dhacay Golaha Shacabka ay ku soo saaratyaan bayaan madashau u dhan tahay, oo aysan sinaba u aqbali karin muddo kororsi sharci darro ah iyaguna ay dib ugu laabanayaan deegaanadoodi, ayna ka xun yihiin wakhtigii dheeraa ee Madaxweynaha xilku ka dhamaadey ka khasaariyey.
Waxaa gebi ahaanba is xirey albaabkii wada hadalka, waxaana la sugayaa sida Madaxweynaha xilku ka dhamaadey Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu u dhaqaajiyo muddo kororsiga.
Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland oo Muqdisho ka dhoofay - Horseed Media • Somali News
Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland ayaa ka dhoofey magaalada Muqdisho kadib safar shaqo oo qaatey bil ay ku...
Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo muddo xileedkiisa dastuuriga ahaa ku ekaa 8 Febaraayo, kadibna samaystey muddo kororsi labo sano ah, ayey soo wajahdey ciriiri siyaasadeed iyo khalkhal amni, taas oo caqabad weyn ku ah mustaqbalkiisa siyaasadeed iyo sida ay ugu meel mari lahayd in uu dalka labo sano oo aan sharci ahayn sii xukumo ama uu dib ugu laaban lahaa miiskii wada hadalka doorashada ee uu albaabkeedi xiray.
Arrinta ugu weyn ayaa ah warka habeenkii xalay ka soo yeeray Farmaajo ee ah in u doonaayo in uu la kulmo Midowga Musharixiinta oo hadda ku haya cadaadiska ugu weyn.
Labada Madaxweyne Dowlad goboleed ee gacansaarka la leh Farmaajo, kan Galmudug Axmed Cabdi Kaariye iyo kan Hirshabelle Cali Guudlaawe ayaa waxaa dhankooda soo wajahay culeys siyaasaded kuwaas oo noqdey hashii laba midigluhu dheelmay.
Midowga Musharixiinta ayaa u direy Qoor-qoor iyo Guudlaawe in ay laba mid soo galaan oo caddeeyaan mowqifkooda ku aadan labada sano ee Farmaajo xilka kororsadey, haddaba kulan ay habeenkii xalay Farmaajo la qaateen ayey kala soo laabteen codsi ay uga sidaan oo ah in ay wada kulmaan Farmaajo iyo Midowga Musharixiinta si masiirka dalka looga wada hadlo.
Arrintan ayaa la is weydiinayaa danta Farmaajo kalahaa.?
• Waxaa la ogaa in Madaxweynayaashii hore oo hoggaamiya Midowga Musharixiinta ay Farmajo isugu yimaadeen aaskii Cali Mahdi Maxamed, laakiin isaga oo aan salaanta ka qaadin uu dib u laabtey.
• 18 Febaraayo waxa uu Madaxweynayaashii hore ku xabadeyey Hotelkii ay deganaayeen oo uu ku go’doomiyey, iyada oo Xassan Sheekh Maxamuud sheegay in ay ahayd dil ay ka badbaadeen, halka 19 Febaraayo uu xabbad la dhacay dadkii mudaaharaadaayey oo ay kamid ahaayeen raysalwasaarihii hore oo hadda kamid ah Musharixiinta.
• Wuxuu Farmaajo diidey dalabayadii Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland ee ah in talada wax laga siiyo Midowga Musharixiinta ee u hadda doonaayo la kulmo.
• Intaas oo arrimood oo taagan, ayuu ALBAABKII wada hadalka si toos ah u xirey isaga oo dalabdey in muddo laba sano ah mudada loogu daro, taas oo qaraar ku soo saareen mid kamid ah labadii Aqal ee doortey, Golaha Shacabka ee muddo xileedku ka dhamaadey, taas oo dab iyo baasiin qabad siisey xaaladda dalka una jiheysey waddo mugdi ah.
Haddaba sida ay sheegayaan ilo ku dhaw Wakiilada Beesha Caalamka, habeenimadii 12 Abril 2021 ayaa Farmaajo la hadley wakiilada Beesha Caalamka waxaana uu u sheegay in uu mudada kororsanaayo laba sano, caqabadda ugu weyn ay tahay iyaga (Beesha Caalamka) oo ay ka daayaan farogelinta, wuxuu u sheegay marka uu kororsado la heshiin doono ugu horreyn Midowga Musharixiinta, kadibna uu u gudb doono Puntland iyo Jubaland.
Maalintii shalay ayaa Farmaajo oo aan ahayn kii dhihi jirey fadhigeyga hala iigu yimaado, qabkiisina meel soo dhigtey, waxaa looga yeeray Xalane, waxanaa uu shir la qaatey kooxda la isku yiraahdo C6+ ee ay kamid yihiin UNSOM, IGAD, AU, EU, UK, US, Sweden, Italy. Kooxdan ayaa kala hadley sida aysan marnaba u aqbaleyn muddo kororsi, sida ay horey u sheegeen iyo tallaabooyinka ay qaadayaan haddii aan dib loogu laaban 17 September heshiiskii ahaa oo ah xalka keliya ee dalka u furan.
Farmaajo oo isticmaalaya tabihiisi uu horey ugu sheegay ayaa ku doodey in uu la ballansan yahay Midowga Musharixiinta heshiisna ay gaarayaan, si lamid ah Deni iyo Madoobana uu heshiis la gaarayo Baarlamaanka dib u mideynaayo, laakiin wakhti la siiyo.
Haddaba kulanka uu doonaayey in musharixiinta la qaato ayaa ah in uu Wakiilada Beesha Caalamka ee cadaadiska ku haya u muujiyo in Soomaalidu ay heshiin karto kuwii ay aadka u kala fogaayeena uu miiska soo fariisiyey, sidaas darteed loo baahan yahay in ay isaga uga danbeeyaan arrimaha Soomalida.
Laakiin, Midowga Musharixiinta oo garanaya qofka uu Farmaajo yahay, ayey ku gacan sayreen la kulankiisa, waxaana maanta hor yaala saddex daran mid dooro.
• In uu waxba kama jiraan ka soo qaado qararaarkii Baarlamaanka, taasna waxa uu u baahan yahay in uu helo sabab iyo wax uu wejigabaxa isaga dhaqo (face saving)
• In uu is casilo una daneeyo mustaqbalkiisa siyaasadeed, si dalka doorasho degdeg ah loogu jihooyo.
• Wixii intaas ka soo harey waa in uu dalka dib ugu celiyaa wadadii dagaalka, qaxa iyo rafaadka lahayd ee isagu aanu markhaantiga ka ahayn, wixii dhacay keliya in uu ka daawado shaashadaha caalamka maahee.
Maxay tahay sababta Farmaajo u dalbadey kulanka Musharixiinta? - Horseed Media • Somali News
Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo muddo xileedkiisa dastuuriga ahaa ku ekaa 8 Febaraayo, kadibna samaystey muddo...
Kinshasa: Farmaajo oo dalbadey in shisheeye soo farogeliyo xaaladda Soomaaliya
Madaxweynaha xilku ka dhamaadey ee weli xafiiska jooga, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa habeenkii xalay gaarey magaalada Kinshasa ee Jamhuuriyadda Dimoqraadiga ee Kongo (ex-Zaire).
Farmaajo ayaa maanta kulan la qaatey Madaxweynaha DR Kongo Félix-Antoine Tshisekedi , kulanka oo ah mid gaar ah oo qaatey muddo laba saacadood ah, ayaa si weyn looga hadley Xaaladda Soomaaliya, maadama Madaxwenaha Dr Kongo hadda uu yahay Madaxweynaha Midowga Afrika.
War qoraal ah oo ka soo baxay madaxtooyada DR Kongo ayaa lagu sheegay in Madaxweyne Félix-Antoine Tshisekedi uu soo dhaweeyey ujeedka iyo dalabka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee ah in uu soo dhex galo xaaladda Soomaaliya isaga oo isticmaalaya awoodisa Midowga Afrika, xaaladda Soomaaliya waa mushkilad Afrikaan ayaa lagu yiri warka waana in Afrika ay xalisataa mushkiladaheeda.
Warka ka soo abxasy Madaxtooyada Dr Congo ayaa lagu yiri Tshisekedi wuxuu soo dhoweeyay habka uu u wajahayo Maxamed Cabdullaahi Maxamed ee ah in uu albaabada u furo AU iyo inuu la xiriiro dhammaan dhinacyada Soomaaliyeed si loo helo nabad iyo cadaalad waarta.
Farmaajo ayaa si weyn ugu doodi jirey in xaaladda Soomaaliya aysan shisheeye soo fara gashan karin, waxaaana hadda muuqata in uu dalab toos ah u geeyey Midowga Afrika oo ciidamada ugu badan ka joogaan Soomaaliya isla markaana ilaaliya halbowlayaasha Dowladdau ku taagan tahay.
Waxaa la is weydiinayaa sida Madaxweyne Tshisekedi uga qaybqaadan karo arrimahan, ma shir Soomaaliyeed ayaa Kinshasa laga furayaa oo waxaa halkaas ka soo bixi doona wax u eg kampala Accord uu ku bixi jirey Farmaajo 2011, mise si kale ayuu u wajahayaa.
Kinshasa: Farmaajo oo dalbadey in shisheeye soo farogeliyo xaaladda Soomaaliya - Horseed Media • Somali News
Madaxweynaha xilku ka dhamaadey ee weli xafiiska jooga, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa habeenkii xalay gaarey...
Kkkkk that is unfortunate really. Maskiinkii Reer Baydhabo oo ku waashay shisheeye muxuu dhihi doonaa. Mise Congo waa our forefathers Awoowe Samaale bay dhaleen oo waa sokeeye???
1. Dowladda Puntland waxay caddeynaysaa heshiiskii 17 September 2020 uu yahay hannaankaliya ee heshiiska lagu yahay si loo qabto doorashada Federaalka, iyadoo la xalinayo caqabadaha hortaagan fulinta heshiiskaas si loo gaaro doorasho si nabad ah, wada oggolna ah ku dhacda.
2. Dowladda Puntland waxay ugu baaqeysaa Saxiixayaashii heshiiskii 17 September 2020, Saamileyda Siyaasadeed iyo Wakiilada Beesha Caalamka ee daneeya hormarka siyaasadda Soomaaliya in miiska wada hadalka lagu soo noqdo sida ugu dhaqsaha badan si loo soo afjaro xaaladda hubanti la’aanta dowladeed, loogana hortago khal khal amni iyo burbur dowladnimo.
3. Haddii ay dhici weydo in dib loogu soo laabto miiska wada hadalka, Dowladda Puntland, iyadoo ka duuleysa go’aanadii shirweynaha Puntland ee 17 March 2020, Ummadda Soomaaliyeed iyo Beesha Caalamkaba la wadaagi doontaa tillaabada ku haboon ee la qaadi karo si loo badbaadiyo masiirka dowladnimo dhiska Soomaaliya iyo danaha gaar ahaaneed ee Dowladda iyo Shacabka Puntland.
4. Dowladda Puntland waxay dadka Soomaaliyeed ugu yeeraysaa in la illaaliyo midnimada, wadajirka, lana badbaadiyo mabaadiida geeddi socodka dowladnimo dhiska Soomaaliya ee ku dhisan hannaanka federaalka ah iyo dimuqraadiyadda.
5. Dowladda Puntland waxay ugu baaqaysaa Shacabka Puntland in ay illaaliyaan midnimadooda dastuuriga ah, amniga iyo xasiloonida Puntland. Dowladda Puntland waxay tillaabo sharciga waafaqsan ka qaadeysaa cid kasta oo isku deyda in ay xasilooni darro ka abuurto Puntland.
6. Dowladda Puntland waxay soo dhaweynaysaa cid kasta oo ka qeyb qaadaneysa xal u helista xaaladda cakiran ee ka jirta Soomaaliya.
Dowladda Soomaaliyeed ee Puntland ayaa soo saartey mowqifkeeda rasmiga ah ee ku aadan xaaladda dalka ee...
New York - The members of the Security Council expressed their deep concern about the continued political impasse and disagreement among Somalia’s political leaders on the model for elections. The...